Araraoty ny varotra Pikolinos, mampiasa vola amin'ny fampiononana | Bezzia
Maria vazquez | 12/01/2022 18:00 | kiraro
Ny varotra dia fahafahana lehibe mividy kiraro kalitao. Izy ireo dia tena a fotoana tena tsara mba hidirana amin'ireo lahatsoratra rehetra izay mandositra ny paosinay amin'ny vidiny voalohany. Ary raha ny lamaody, akanjo ivelany sy kiraro matetika no mipetraka amin'ireo toerana ireo. Izany no antony inoanay fa tianao ny hahita ny fivarotana Pikolinos.
Pikolinos dia orinasa espaniola izay manolo-tena amin'ny maha-azo itokiana, kalitao ary fampiononana. Orinasa iray izay azonay antoka fa ho fantatry ny rehetra ary manolotra fihenam-bidy hatramin'ny 30% amin'ny fanangonana azy amin'izao fotoana izao. Ny fampihenana tokony hodinihina noho ny kalitao sy ny faharetan'ny kiraronao.
Ankoatra ny fampiononana sy ny faharetany, isika izay mipetraka any avaratry ny saikinosy dia manaiky ny kirarony sy ny kirarony ho vahaolana tsara ho an'ny miady amin'ny hatsiaka sy ny orana. Ary tsia, tsy dokam-barotra izany fa traikefantsika. Izany no antony inoanay fa mahaliana ny mizara aminareo ny sasany amin'ireo tolo-kevitr'izy ireo mahaliana indrindra.
2 Kiraro fisaka sy fanatanjahan-tena
ny kiraro antsasany boribory, Vita amin'ny hoditra izy ireo, ka lasa mpiara-miasa tsara amin'ny andro ririnina. Mankanesa any amin'ny birao, mivoaka misotro ... ny modely Vícar misy elastika amin'ny sisiny ary Aspe misy fanitsiana dantelina sy zipo amin'ny sisiny. Ho tianao izy ireo! Ny hany anatiny misy padded dia lasitra tsara amin'ny silhouette amin'ny tongotra ary ny falany tsy mitongilana dia manome ny fikitihana tonga lafatra ilainao handehanana soa aman-tsara.
Ireo modely voalaza manana fihenam-bidy 30% izy ireo Tahaka ny modely Pompeya, kiraro kitrokely avo lenta tonga lafatra amin'ny bika aman'endrikao indrindra izay hahagaga anao amin'ny fampiononana azy. Ary inona no dikan'ny 30% amin'ireo kiraro ireo? Ny vidiny dia midina avy amin'ny € 120-140 ka hatramin'ny € 80-97.
Kiraro fisaka sy fanatanjahan-tena
Raha tianao ny hanao laharam-pahamehana ny fampiononana sy miloka amin'ny a kiraro fanatanjahan-tena Isan'andro dia hahita safidy maro ianao amin'ny fivarotana Pikolinos hanavao ny kiraronao. Miaraka amin'ny tsipika maivana sy malefaka, ny fiara fanatanjahantena Cantabria na Sella dia lasa safidy tsara. Izy roa ireo dia manana hany tokana ultralight tsara indrindra amin'ny fandehanana manodidina ny tanàna.
Afaka miloka ihany koa ianao kiraro hoditra mampahazo aina isan'andro, kanto sy isan-karazany. Amin'ny mainty, rameva na burgundy ary miaraka amin'ny ambainy izay ahafahanao manitsy azy ireo amin'ny tongotrao izay rehetra ilainao, tsy hanala azy ireo ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » kiraro » Araraoty ny varotra Pikolinos, ampio amin'ny fampiononana
Te hanao makiazy ny zanako vavy, aloha loatra ve?